Ryan Gordon Anoenda Kune SDL Kuvandudzwa | Linux Addicts
Ryan Gordon wekuvandudza SDL
Isaac | 24/11/2021 22:18 | Noticias, Zvirongwa
SDL inomirira Simple DirectMedia Layer, seti yemaraibhurari akagadzirwa mumutauro weC uye anogona kupa mamwe mabasa akakosha kuita 2D kudhirowa mashandiro, ruzha rwekuita manejimendi, uye kutonga kwemifananidzo. Nhau dzaisvetuka mazuva mashoma apfuura ndedzekuti Ryan Gordon (aka Icculus) akawana epic MegaGrant kuti awedzere kuvandudza SDL, iyo inogona kubatsira ramangwana-chizvarwa APIs.
Kutenda kuSDL, iyo Multiplatform vhidhiyo mutambo wekuvandudza, kuti zvive nyore kune vanogadzira, zvichiita kuti zvive nyore kuti mamwe mazita auye kuLinux. Uye ndezvekuti iyi seti yemaraibhurari inobvumira yakaderera-chikamu kupinda kune odhiyo hardware, keyboard, mbeva, joystick, uye zvakare mifananidzo. Naizvozvo, inogona kushandiswa nesoftware kutevedzera, yekutamba kwevhidhiyo, odhiyo, uye vhidhiyo mitambo injini.
Ryan gordon Ndiye mumwe wevanhu vane basa rekusimudzira SDL, uye zvakare mugadziri wemavhidhiyo emitambo ports yeLinux uye macOS, pamwe nemamwe mapuratifomu, ari kushanda zvakanyanya mumakore achangopfuura. Mushure mekuzivisa kwaakaita paPatreon, nezvezvinangwa zvake, akajekesa kuti SDL ichine zvakawanda zvekutaura.
Dambudziko kusvika parizvino nderekuti Vulkan API Yakanyanya mazuvano, inovimbisa uye ine simba kupfuura OpenGL, zvisinei API iyi yaive yakaoma uye pakanga paine matambudziko neSDL. Zvino zvakaitwa naRyzen Gordon kufambisa basa neVulkan, kunyangwe ivo vachizoenderera mberi nekushanda nevamwe vakaita seDirect3D, Metal, nezvimwe. Uye kunyangwe paine zvimwe zvisingakwanisi, zvichaita kuti chizvarwa chinotevera APIs chiwanikwe kune vese vasiri AAA injini vanogadzira.
Pakupedzisira, kuvandudzwa kweSDL kuchauya ita kuti basa rebudiriro rive nyore, uye nenzira yakajeka kune vanogadzira, saka vanogona kuita mitambo yavo pasina kuomeswa kwakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ryan Gordon wekuvandudza SDL
inoita 2 mwedzi
Iyo Vala compiler inoita kuti kushanda neSDL kuve nyore kune vanotanga.
QEMU 6.2: RISC-V, SGX, Apple Silicon (M1) nezvimwe ...
Firefox ichavhara Lockwise yayo muna Zvita. Mapassword anozobatanidzwa mubrowser